Man City Oo Etihad Stadium Ku Garaacday Chelsea+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man City Oo Etihad Stadium Ku Garaacday Chelsea+SAWIRRO
Manchester City ayaa Etihad Stadium ku garaacday kooxda Antonio Conte ee Chelsea waxayna Sky Blues hadda labada gacamoodba ku sii qabsatay koobka Premier league iyada oo hadda ubaahan kaliya in ay guulaysato afar kulan iyada oo ay guulaha looga baahan yahay intan ka yaraan karaan haddii ayna Man United kulamadeeda guulaysan.
Gool kaliya oo uu Bernardo Silva dhaliyay bilawgii qaybtii labaad ee Manchester City u gacan galiyay saddexda dhibcood iyada oo Blues natiijo ahaan iyo ciyaar ahaanba loo karbaashay kulan Antonio Conte uu tatiko ahaan u fashilmay.
Manchester City ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo doonaysay in ay afar guulood oo kaliya u jirsato ku guulaysiga koobka ay Chelsea haysato ee Premier League laakiin qorshaha Antonio Conte ayaa ahaa in ayna kooxdiisu guuldaro kale la kulmin si ayna u sii xumaan rajadooda kaalmaha sare ee Champions League-ga loogu soo baxayaa.
Qaybtii hore ee kulankan ayaan noqon mid goolal layska dhaliyay inkasta oo awooda labada kooxood ay kala badnayd maadaama oo ay Manchester City oo garoonkeeda marti loogu ahaa ay abuurtay fursadihii ugu badnaa laakiin difaaca iyo goolhayaha Chelsea ayaa awooday in aan qaybtii hore wax goolal ah laga dhalin.
XOGTA IYO IBARBAR DHIGA QAYBTII HORE EE LABADA KOOXOOD:
Manchestr City iyo Chelsea ayaa qaybtii hore ee kulankan ku fashilmay in ay wax goolal ah kala dhaliyaan laakiin kooxda Guardiola ayaa ahayd kooxda shaqada ugu badan garoonka ka qabtay. Waxyaabaha la yaabka leh ee qaybtii hore ee kulankan laga diwaan galiyay waxaa ka mid ah in Man City ay boosishanka haysatay boqolkiiba 78% iyada oo boqolkiiba 28 ka soo hadhay ay Chelsea lahayd.
Manchester City ayaa hal mar oo kaliya bartilmaameedsatay goolka Chelsea halka 8 darbo oo kale ay seegeen bartilmaameedka laakiin Chelsea ayaa si buuxda ugu fashilantay in ay wax darbo ah ku tuurto goolka Manchester City taas oo muujinaysa sida ayna kooxda Antonio Conte weerar ahaan u fiicnayn qaybtii hore ee kulankan.
Chelsea ayaa 8 taakal samaysay qaybtii hore ee ciyaarta halka Manchester City ay samaysay 4 taakal waxayna ahayd qaybtii hore mid laysku daalay balse Manchester City ay heshay fursad abuurista ugu fiicnayd laakiin ayna wax goolal ah dhalin.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah waxaana lays waydiinayay haddii Chelsea ay 45 ka daqiiqo ee qaybta labaad ay u adkaysan karto weerarkii badnaa ee ay City ku haysay iyo haddiiba ay kooxda Antonio Conte sare u qaadi karto weerarkeeda.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta qorshaha Manchester City ayaa markiiba ahaa mid cadaan ah waxayna doonaysay sidii ay u jabin lahayd difaacashadii adkayd ee Chelsea soo bandhigtay qaybtii hore ee ciyaarta.
DAQIIQADII 46 AAD Manchester City ayaa markiiba heshay goolkeeda furitaanka kadib markii uu xidiga bandhiga cajiibka ah la soo baxay ee Bernardo Silva uu dhaliyay goolka wadno xanuunka ku noqday Antonio Conte isla markaana ka farxiyay jamaahiirta Etihad Stadium, waxaana caawinta goolkan sameeyay David Silva kadib markii uu difaaca Christensen qalad sameeyay, waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay City hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Manchester City ayaa markii ay goolka heshay bilawday in ay Chelsea ka dhaariso kubbada waxayna mararka qaar noqonaysay wax lagu caajiso in Chelsea ayna muddo dheer kubbada taabanayn halka kooxda Guardiola ay markale muujisay sida ay u tahay boqorada boosishanka iyo kubbad haynta Premier League.
DAQIIQADII 78 AAD Leroy Sane ayaa dhulka kaga soo tagay Moses wuxuuna kubbad dilaa ah la soo galay xerada ganaaxa Chelsea laakiin kubbada uu soo hormariyay goolka Chelsea ayaa si nabad galyo ah ku dhaaftay iyada oo Aguero uu awoodi waayay in uu kubbada goolka ku qabto.
DAQIIQADII 78 AAD Antonio Conte ayaa kaydka ka soo kiciyay Giroud wuxuuna badalay Willian oo aan helin fursadihii looga bartay maadaama oo ay kooxdiisa ku adkayd in ay hesho kubbad badan oo ay fursado ku abuuri kartaa.
DAQIIQADII 82 AAD Conte ayaa sidoo kale ciyaarta ka saaray Pedro wuxuuna ciyaarta soo galiyay Emerson waxayna markan Chelsea rajo ka qabtay in haddii ay Man City dhalin wayday goolka laabad ay fursado ku raadiyaan goolka barbaraha.
DAQIIQADII 85 AAD Guardiola ayaa kaydka uga yeedhay da’yarka Gabriel Jesus wuxuuna ciyaarta ka saaray Sergio Aguero oo wali markale sii sugi doona goolkiisa 200 aad ee uu ilaa kulamadii ugu danbeeyay raadinayay.
DAQIIQADII 87 AAD Guardiola ayaa ciyaarta ka saaray Oleksandr Zinchenko oo markale muujiyay sida uu kulan kasta oo wayn u safan karo wuxuuna kaydka ka soo kiciyay Danilo Luiz da Silva .
DAQIIQADII 90 AAD Conte ayaa la soo daahay Álvaro Morata oo waqti ahaa xidig kooxdiisa muhiim ka ahaa wuxuuna markan badalay Eden Hazard laakiin waqtiga uu Morata keenay isaga oo gool lagu lahaa ayaa su’aal wayn keenaysa.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0 ay Manchester City ku garaacday Chelsea isla markaana ay talaabo wayn sare ugu qaaday ku guulaysiga koobka Premier league. Man City ayaa hadda u baahan afar guulood oo kaliya si ay koobka Premier league ugu guulaysato laakiin intan ayay ka yaraan karaan haddii ayna Man United kulamadeeda guulaysan.
Laakiin guuldarada Chelsea soo gaadhay ayaa la micno ah in ay halis wayn ugu jirto in ay seegto kaalinta afraad maadaama oo ay kooxda Tottenham guul si gaadhay halka xaalada Blues ay noqotay mid waji xun oo kale sii yeelatay.